अमेरिका चन्द्रमा गए नगएको पत्ता लगाउँदै रुस !| Nepal Pati
अमेरिका चन्द्रमा गए नगएको पत्ता लगाउँदै रुस !
मस्को । रूसको रोस्कोसमोस अंतरिक्ष एजेन्सीले भनेको छ कि चन्द्रमा जाने नयाँ प्रस्तावित मिशनको काम सत्य स्थापित गर्नु हो । बिगतमा अमेरिका चन्द्रमा पुगेको दावी सही वा गलत के थियो ? पत्ता लगाउने रुसको भित्री चाहाना रहेको छ ।
दिमित्री रोगोजिनले गत शनिवार ट्वीटर मार्फत एक भिडियो अपलोड गर्दै भनेका छन । हामीले सत्य स्थापित गर्न एक उपकरण निर्माण गरेका छौं । जसले अमेरिका त्यहाँ गए नगएको पत्ता लगाउन सक्ने छ । रोगोजिन त्यो सवालको जवाब दिंदै थिए जसमा नासा करीब ५० बर्ष पहिला चन्द्रमा गए नगएको बारेमा बोल्दै थिए । रूसमा अमेरिकी नासाको चन्द्रमा यात्रालाई लिएर आम मानिस संका गर्दै आइरहेका छन ।
सोभियत संघले सन १९७० को दशक देखी आफ्नो चन्द्रमा कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको थियो । सन १९७० को बीच भागमा उसको चन्द्रमा खोजमा प्रयोग गरिएको चार प्रयोगात्मक रकेट विस्फोट भएसँगै स्थगित गरिएको थियो । हालको वर्षमा आएर रुसले आफ्नो पुरानो प्रयोगलाई निरन्तरता दिने बताएको छ ।
एजेन्सी । टर्की भूकम्पमा मर्नेको संख्या ३१ पुग...
एजेन्सी । टर्कीमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्प...
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल...